Taliban oo Turkey u gudbisay codsi la xiriira garoonka diyaaradaha Kabul | Xaysimo
Home War Taliban oo Turkey u gudbisay codsi la xiriira garoonka diyaaradaha Kabul
Taliban oo Turkey u gudbisay codsi la xiriira garoonka diyaaradaha Kabul
Kooxda Taliban ayaa weydiisatay Turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib marka ay baxaan ciidamada shisheeye, laakiin Taalibaan ayaa ku adkaysaneysa in milatariga Ankara ay sidoo kale si buuxda uga baxaan Afghanistan dhammaadka bishan August.
Sida laga soo xigtay laba sarkaal oo Turkish ah, codsiga ay shuruuddu ku xirantahay ee Taalibaan oo imanaya kadib markii ay dib ula wareegtay xukunka Afghanistan 20 sano kadib markii uu dhammaaday duulaankii Mareykanka, ayaa Ankara uga dhigan qaadashada go’aan adag oo ku saabsan inay aqbasho shaqadan halist ah, haddii aysan ciidankeedu Afghanistan sii joogi doonin.
Turkey ayaa qeyb ka ahaa hawlgalka NATO ee Afghanistan, walina waxaa garoonka diyaaradaha ee Kabul ku sugan boqolaal askari, balse saraakiisha ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin inay wakhti kooban uga baxaan Afghanistan.
Laakiin xukuumadda Madaxweyne Tayyib Erdogan ayaa hore u sheegtay muddo bilo ah inay joogi karto garoonka haddii laga codsado, waxaana Turkigu uu kaalmo farsamo iyo mid amniba ku taageeray garoonka diyaaradaha kadib markii Taliban ay gacanta ku dhigtay dalkaas.
“Taliban waxay codsatay taageero farsamo si ay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee Kabul,” ayuu yiri sarkaal sare oo Turkish ah, isagoo raaciyay “Si kastaba ha ahaatee in Taalibaan ay dalbato in dhammaan ciidamada Turkiga ay baxaan waxay adkayn doontaa hawl kasta oo fulin u baahan”
Ma cadda in Turkigu oggolaan doono inuu bixiyo kaalmo farsamo haddii aysan ciidamadoodu halkaas u joogin si ay u sugaan ammaanka.
Turkiga ayaa ammaanay waxa ay ku tilmaameen hadallada dhex-dhexaadka ah ee Taalibaan tan iyo markii ay qabsadeen Kabul, waxayna sheegeen inay u furan tahay inay la shaqeyso marka dowlad cusub la dhiso.
Afhayeenka Taalibaan Zabihullah Mujahid ayaa Talaadadii sheegay in kooxdu ay xiriir wanaagsan la yeelatay Ankara.